အထောင် တိုက်စစ်မှုးကောင်း တစ်ဦး ရဲ့ အရည်အသွေးများ . . . . . by Zlatan Ibrahimovic - SPORTS MYANMAR
အထောင် တိုက်စစ်မှုးကောင်း တစ်ဦး ရဲ့ အရည်အသွေးများ . . . . . by Zlatan Ibrahimovic
ဘောလုံး သမား ဖြစ်ချင်သူတွေ ကို ဘယ်နေရာ မှာ ကစားချင်လဲလို့ လိုက်မေးကြည့် လိုက်ပါ ။ အများစု က တိုက်စစ် နေရာတွေ မှာ ကစားချင်တယ် လို့ ဖြေကြပါလိမ့်မယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဂိုးသွင်းချင် ကြလို့ ပါပဲ ။ ဘောလုံး ပွဲ တစ်ပွဲမှာ ဂိုးသွင်း ရတာ ဟာ ခံစားလို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သလို ပွဲရလဒ် အတွက်လည်း အဓိက အကျဆုံး ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် တိုက်စစ်မှုး တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို အရည်အသွေး တွေ လိုအပ်တယ် ဆိုတာ ရော သိကြပါရဲ့လား . . .
ဒီကဏ္ဍ အတွက် ရွေးချယ် လိုက်သူ ကတော့ ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ် ပါပဲ ။ ဆွီဒင် တိုက်စစ်မှုးကြီး ဟာ အထောင်တိုက်စစ်မှုး နေရာ ကနေ ရောက်လေရာ ကလပ်တိုင်းမှာ ဂိုးတွေ တသီကြီး သွင်းပေးခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ အသက် 37 နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဇလာတန် ဟာ ကစား သမား ဘဝ တစ်လျောက် မြောက်များစွာသော ကစား သမားကောင်းတွေ ၊ နည်းပြကောင်းတွေ နဲ့ ဆုံခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် တိုက်စစ်မှုးကောင်း တစ်ယောက် ဟာ ဘယ်လို စွမ်းဆောင်မှုမျိုးတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ဇလာတန် က ကောင်းကောင်းကြီး ပြောပြနိုင်မှာပါ . .
ကဲ . . . ဇလာတန် ပြောပြမယ့် အထောင်တိုက်စစ်မှုးကောင်း တစ်ယောက် ရဲ့ အရည်အသွေးတွေ ဆိုတာ ဘာတွေလဲ နားထောင် ကြည့်လိုက် ကြရအောင် . . .
No.1 – Holding up the ball ( ဘောလုံးကို ကာပြီး ထိန်းထားခြင်း )
“အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ဆီကို ဘောလုံး ရောက်လာချိန် မှာ အဲ့ဒီ ဘောလုံး ကို မဆုံးရှုံး ဖို့ ပါပဲ ။ တကယ်လို့် တစ်ယောက် တည်းဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့ရဲ့ ကျော ၊ လက် ၊ ခွန်အား နဲ့ ဟန်ချက် တွေ ကို သုံးပြီး ဘောလုံး မဆုံးရလေအောင် ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းတွေ ကို ထိန်းကာထား ပါတယ်”
“ဒါက အရေးကြီးပါတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကိုယ်က ဘောလုံး ကို ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင် အသင်းဖော် တွေ ကို တိုက်စစ်မှာ လာ ပူးပေါင်းဖို့ အခွင့်အရေး ဖြစ်စေလို့ ပါပဲ ။ ကျန်တဲ့ ကစား သမားတွေ ခွင်ထဲ ကို ရောက်လာတဲ့ အထိ ကျွန်တော် ထိန်းထား ရမှာပါ”
“တကယ်လို့ တစ်စုံ တစ်ယောက် က နေရာ ကောင်းကို ရောက်သွားမယ် ဆိုရင် ဘောလုံး ကို သူ့ဆီ ထိုးပေး လိုက် ပါတယ် ၊ သူက ဂိုးသွင်း မယ် ဒါမှ မဟုတ် ဂိုးသွင်းဖို့ ပြေးတက်လာမယ့် ကျွန်တော့ ကို ပြန် ထိုးပေးချင် ပေးမယ်ပေါ့ ။ ဒါမျိုး က ဘယ်အချိန် မှာ ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို မှန်မှန် ကန်ကန် ဆုံးဖြတ် နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်”
Jun 2, 2019; Carson, CA, USA; LA Galaxy forward Zlatan Ibrahimovic (9) controls the ball in front of New England Revolution defender Jalil Anibaba (3) in the first half at StubHub Center. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports
No.2 – Positioning yourself ( နေရာယူကောင်းခြင်း )
“ဘောလုံး ရနိုင်တဲ့ နေရာကို ရောက်နိုင်ဖို့ အမြဲ ကြိုးစား ပါတယ် ။ တစ်ခါ တစ်လေ နောက်ပြန် ဆုတ်ရတာမျိုး လည်း ရှိပါတယ် ၊ တစ်ခါ တလေ အသင်းဖော် တွေ နေရာလွတ် ရဖို့ ခံစစ် သမားတွေ ကို ကိုယ့်နောက်ကို လိုက်လာ အောင် ဆွယ်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်”
“တိုက်စစ်မှုးကောင်း တစ်ယောက် ဟာ အနစ်နာ ခံသင့်တဲ့ အခါမှာ အနစ်နာ ခံတတ်ရပါတယ် ။ နောက်တန်းတွေ ကိုယ့်နောက်ကို လိုက်လာတဲ့ အခါမှာ တောင်ပံက ဒါမှမဟုတ် ကွင်းလယ်ကနေ တက်လာတဲ့ အသင်းဖော် အတွက် ဂိုးသွင်းခွင့်တွေ ပေါ်လာနိုင် ပါတယ် ။ ကိုယ့်အတွက် ဘောလုံး ထိခွင့် မရှိဘူးဆိုတာ သိသိ နဲ့ တောင် ဒီလို အနစ်နာခံ စတေးမှုမျိုး ကို လုပ်နိုင် ရပါမယ်”
No.3 – Meeting crosses ( ဖြတ်တင်ဘော ကို အသုံးချမှု )
“ဖြတ်တင်ဘောတွေ ကို ရဖို့ အဓိက အချက်ကတော့ နောက်တန်းတွေ ထက် ဦးဆောင် ရွှေ့နိုင်ဖို့ ပါပဲ ။ ဒါမှ ကိုယ်လိုသလောက် နေရာလွတ်ကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ ။ ဒီနေရာမှာ ဒေးဗစ် ထရာဇီဂေး က အရမ်းကောင်းပါတယ် ။ သူ့လောက် နေရာယူ ကောင်းပြီး ဦးအောင် ထွက်တတ်တဲ့ တိုက်စစ်မှုးမျိုးကို မတွေ့ဖူးပါဘူး”
“ဖြတ်တင်ဘော ၊ တည်ကန်ဘောတွေ ကို အသုံးချနိုင်ဖို့ ဆိုတာ ဉာဏ်ကောင်းဖို့ လည်းလို ပါတယ် ။ တခါ တလေ မှာ ကိုယ့် အနားက လူတွေ နဲ့ ဘောလုံး ရဲ့ အနေအထား ကို ကြည့်ပြီး နောက်မှ လှုပ်ရှား ရတာမျိုးတွေ လည်း ရှိတတ် ပါတယ် ။ ဒါမျိုး က တကယ်ထူးချွန်တဲ့ တိုက်စစ်မှုးတွေ မှ လုပ်နိုင်တဲ့ အရာမျိုးပါ”
No.4 – Anticipating play ( ကြိုတင် တွက်ဆနိုင်ခြင်း )
“ဘောလုံး ကိုယ့်ခြေထဲ ကို စရောက်လာတာနဲ့ နောက် စက္ကန့် အနည်းငယ် အတွင်း မှာ ပြိုင်ဘက်တွေ ဘာလုပ်မယ် ၊ ကိုယ့် အသင်းဖော်တွေ ဘာလုပ် မယ် ဆိုတာ အမြဲ ခန့်မှန်း တွက်ဆ ရပါတယ် ။ ဒါမျိုး က အမြဲတမ်းတော့ မှန်အောင် မလုပ်နိုင် ခဲ့ ပါဘူး ။ ဒီလို များများ လုပ်နိုင်လေလေ ၊ ပိုတော် ပိုကောင်းတဲ့ ကစား သမား ဖြစ်လာလေလေ ပါပဲ ။ ဒီ အရည်အသွေး ဟာ ထိပ်တန်း အဆင့် နဲ့ သာမာန် အဆင့် ကစား သမားတွေ ကို ခွဲခြားပေးတဲ့ အရာပါ”
No.5 – Battling center-backs ( ခံစစ်မှုးများနှင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း )
“ခံစစ် သမား အများစု ဟာ ကိုယ့်ကို တွန်းတာတွေ ၊ ဆွဲတာတွေ လုပ်တတ် ပါတယ် ။ အချို့က ကိုယ့်လောက် မတော်လို့ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပြီး အချို့ ကတော့ ပါးပါး နပ်နပ် နဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ လုပ်ကြတာပါ ။ ဒါကို ကြံ့ကြံ့ခံ ထားနိုင် ဖို့ ကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ။ ကျွန်တော် ကတော့ ခံစစ်မှုးတွေ ထဲမှာ ပေါ်လို မာဒီနီ နဲ့ နက်စ်တာ တို့ကို အလေးစားဆုံး ပါပဲ”
No.6 – Coping with abuse ( နှိပ်စက် ထိုးနှက်မှု ကို တောင့်ခံကျော်လွှားနိုင်ခြင်း )
“ခံစစ်သမား တွေ ဟာ ကိုယ့်ကို ကာယပိုင်း အရ ရော ခြေတွေ လက်တွေကို သုံးပြီးတော့ ရော အထိနာ အောင် ထိုးနှက် နိုင်ပါတယ် ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် မထိ တထိတွေ ပြောတတ်ပြီး ညစ်ညစ် ပတ်ပတ် နဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောတတ်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိ ပါတယ် ။ ဒါတွေကို စိတ်ထဲ မှတ်ထားပြီး တုန့်ပြန်မယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် အတွက် အကျိုးမရှိတာပဲ ဖြစ်လာမှာပါ ။ သူတို့ကို အကောင်းဆုံး လက်တုန့်ပြန်နည်းကတော့ ဂိုးသွင်းပစ်လိုက် တာပါပဲ”